စျေးသည်ဆိုတာ အဲလိုရောင်းရတယ် #နောက်ဆုံးတော့ ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလေ…. – စွယ်စုံသုတ
စျေးသည်ဆိုတာ အဲလိုရောင်းရတယ် #နောက်ဆုံးတော့ ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလေ….
🙄 .. 😌
ယ​နေ့​ နေ့လည် မြန်မာစံ​တော်ချိန် ၂ နာရီခွဲအချိန်တွင်…..ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အတွင်းရှိဌ ရပ်ကွက်​နေပြည်သူတို့၏အကူအညီဖြင့် ဘက်​ပေါင်းစုံမှ ပိတ်ဆို့တားဆီး၍ ထို လူ မောင်းနှင်လာ​သောသုံးဘီးဘေးတွဲဆိုင်ကယ်​ရှေ့တွင် သက်စွန့်ဆံဖျားပိတ်ဆို့ကာ အုန်း​မွှေးလုံး​ရောင်းသူအား အမိအရတားစီးပြီး ဝယ်စားနိုင်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့​ကြောင်း…….
ဖြစ်စဥ်မှာ……အုန်း​မွှေးလုံး​ရောင်းသူ အမျိုးသားသည် ယခင် စက်ဘီးဖြင့်​ရောင်းစဥ်အခါများတွင် “အုန်း​မွှေး” ဟုအသံကြားခဲ့​သော်လည်း ​ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူတချို့သည် ​နောက်က “လုံး” ပါမလာသည့်အတွက် ဘာအသံ ထပျကွားရမလဲဟုသတိထားစောင့်ကြည့်ခဲ့ရာမှ…
“အုန်း​မွှေး” ဆိုသည့် အသံကိုသာကြားရပြီး “လုံး”ဆို​သောစကားမ​ရောက်ခင်​ ပျောက်​ပျောက်သွား​သောကြောင့် မည်သူမျှဝယ်မစားနိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဥ်များ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်​ပေါ်ခဲ့သည်။
​နောက်ပိုင်းတွင်…..ထိုအုန်း​မွှေးလုံး​ရောင်းသူမှာ သူ့အားမည်သူမှဝယ်၍ မရ​​နိုင်စေရန်အကြံအစည်ဖြင့် စက်ဘီးအစား ​ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ကို​မောင်းနှင်၍ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ယခင်​အော်​နေကျ “အုန်း​မွှေး” ဆိုသည့်အသံ​တောင်မကြားရပဲ “အုန်း” ဟူသာတစ်လုံးထဲ​အော်၍ ​​ပျောက်ပျောက်သွားသည့်ဖြစ်စဥ်များ ထပ်မံဖြစ်​ပေါ်လာ​သော​ကြောင့်
ရပ်ကွက်​နေပြည်သူအချို့ပူး​ပေါင်း၍ ကင်းပုန်းများချကာ ထိုသူ​ ဆိုင်ကယ်​မောင်းနှင်လာစဥ် သက်စွန့်ဆံဖျား လမ်း​ပေါ်ခုန်တက်၍ ​ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်​ရှေ့တွင် လူအုပ်လိုက်ကြီးပိတ်ဆို့ပြီး တစ်လုံးဘယ်​လောက်လဲဟူ၍​မေး​မေးပြီး ဝယ်စားခဲ့ကြရသည့်ဖြစ်စဥ်တစ်ခုအား မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် အတွင်းရှိဌ ရပ်ကွက် ပိတောက်လမ်းထဲတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဖေ အိုနေပြီလား? စားချင်တိုင်းလည်းမစားနိုင် သွားချင်တိုင်းလည်းမသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ အဖေနဲ့ အတူစားဖို့ အတူလည်ပတ်ဖို့ သတိရရဲ့လား